Nin British cadaan ah oo cunsuriyeeyey haweenay Madow oo la saarneyd diyaarada Ryan Air… – Hagaag.com
Nin British cadaan ah oo cunsuriyeeyey haweenay Madow oo la saarneyd diyaarada Ryan Air…
Posted on 23 Oktoobar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Video lagu faafiyey baraha bulshada ayaa lagu arkay nin British cadaan ah oo saaran diyaarada Ryan Air oo weerar dhinaca afka ah oo cunsurinimo kula dul dhacay haweeney dhinac fadhiday oo jirkeeda madoobaa, asaga oo diiday in ay ag fadhiisato, wuxuuna ku tilmaamay naagtii foosha xumeyd ee madoobeed.
Ninka ayaa la arkayey asaga oo ku cadaadinaya haweeneyda oo leh ” haddii aadan bedelan kursigaaga, waxaan kugu qasbi doonaa in aad bedelato”, inkastoo uu fadhiyey dhinaca daaqada iyana fadhiday halka la maro, waxaa banaanaa kursi u dhaxeeyey labadooda, ninkan oo ahaa qof waayeel ah ayaa ku yiri “waxaan rajeynayaa in qof kale dhexdeena soo fadhiisto, ma doonayo meel ii dhow oo aan ka arkayo wajigaaga weyn inaad fadhidid”.
Haweeneyda oo kula hadleysay luqada Ingriisiga ayuu ku jeesjeesay oo ku yiri oo weliba ma luqada ingriisiga ayaad ku hadleysaa, waxaa la arkayey xubnaha ka shaqeeya diyaarada oo u muuqday kuwa wareersan oo garan la’ talaabada ay qaadayaan, ugu dambeyntii waxaa lagu dhameeyey iyada oo loo bedelay kursiga haweeneydii, duulimaadka ayaa ka yimid Barcelona kuna socday London.
Video-ga ayaa ku faafay baraha bulshada, halkaasi oo Ryan Air kala kulantay dhaleeceyn sababtoo ah iyaga oo awoodi waayey in ay joojiyaan xadgudbka loo geysanayey haweeneyda, shaqaalaha diyaarada ayaa ahaa kuwo iska daawanayey dhacdada. Dad badan ayaa soo jeediyey in ay dhici karto olole lagu qadacayo shirka diyaarada in la arko.
Haweeneyda oo 77 jir aheyd ayaa ka soo laabatay fasax ay kula joogtay gabadheeda munaasabada geerida ninkeeda, waxay qabtay cudurka ku dhaca kalagoysyada, taasi oo sabab u aheyd in ay ku qaadato waqti dheer dhaqaaqa.